ဝိတ် ကျချင်လား ? Lose It! Application ကို သုံးပါ။ ~ The ICT.com.mm Blog
သင်နေ့ စဉ် စားသုံးတဲ့ အစားအစာတွေမှာ ပါ၀င်တဲ့ ကယ်လိုရီ ကိုတွက်ချက် ပြီး သင့်တော်တဲ့ အစားအစာကိုရွေးချယ်စား ခြင်းအားဖြင့် ဝိတ်ကျအောင် ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စားတဲ့ အစားအစာ တိုင်းရဲ့ ကယ်လိုရီ ကို တွက်ချက်ရတာဟာ တော်တော်မလွယ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ Lose It! ဆိုတဲ့ iOS App က သင်စားတဲ့ အစားအစာ တွေရဲ့ ကယ်လိုရီ ကိုတွက်ချက်ပေးနိုင်ပြီး သင့် ကိုယ်အလေးချိန် ကျအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် လေ့ကျင့်ခန်း တွေ လုပ်ခြင်းဖြင့် လောင်ကျွမ်း သွားတဲ့ ကယ်လိုရီ ပမာဏကိုလည်း အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ တွက်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Food Database ပါရှိခြင်း။
ဝိတ် ကျဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေ ထဲက နေ့စဉ်စားသောက်တဲ့ အစားအစာတွေကို မှတ်သားထားတဲ့သူတွေဟာ မှတ်သားခြင်းမရှိတဲ့ သူတွေ ထက် ပို ဝိတ်ကျစေတယ်လို့ စစ်တမ်းတွေက ဖော်ပြထားပါတယ်။ Lose It! App က အဲဒီ သဘောတရားကို အခြေခံပြုလုပ်ထားပြီး သင့်ကို ဝိတ်ကျအောင်ကူညီပါလိမ့်မယ်။
App ကို ပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်ရင် သင့်ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ လက်ရှိ ကိုယ်အလေးချိန်၊ ရည်မှန်းထားတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ၊ ကျား/မ ၊ အရပ်အမြင့် စတာတွေကို ဖြည့်ပေးရပါမယ်။ တစ်ပတ်ကို အလေးချိန် ဘယ်လောက်ကျဖို့ ရည်ရွယ်ထားလဲဆိုတာကိုပါ သတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ Lose It! App က သင် တစ်နေ့စားသုံးသင့်တဲ့ ကယ်လိုရီ ပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးပြသပေးပါမယ်။ Homepage မှာ သင် တစ်နေ့ စားသုံးရမယ့် ကယ်လိုရီ ကိုဖော်ပြထားပြီး စားသုံးပြီးတဲ့ ကယ်လိုရီ ကိုလည်း ဘားတန်းလေးနဲ့ ဖော်ပြပေးထားတဲ့အတွက် ကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်လွန်ပြီး မစားမိစေဖို့ အလွယ်တကူသိရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်တာတွေကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်နိုင်ပြီး ကယ်လိုရီ ကို ကျဆင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Lose It! မှာ သင်စားတဲ့ အစားအစာတွေကို မှတ်ရတာလွယ်ကူပါတယ်။ အစားအစာတွေရဲ့ နာမည်တွေကို ရိုက်ပြီး ရှာ တဲ့ နည်းကအလွယ်ကူဆုံးနည်းဖြစ်ပါတယ်။ Lose It! App မှာ အစားအစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Database တွေကို ထည့်သွင်းထားတာ ဖြစ်ပြီး ဘယ်အစားအစာက ကယ်လိုရီ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ App ကအလိုလိုတွက်ချက်ပေးမှာပါ။ သင်စားတဲ့အစားအစာ ဟာ Database ထဲမှာ မပါရှိရင် ကိုယ်တိုင် နာမည်ရိုက်ပြီး မှတ်သားနိုင်ပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် အဲဒီ အစားအစာကို နာမည်ရိုက်ပြီး ရှာလို့ရတဲ့အတွက် အဆင်ပြေစေပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Database တွေလည်း App မှာ ပါရှိတဲ့ အတွက် စားသောက်ဆိုင် မှာ သွားစားတဲ့အခါအလွယ်တကူ မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။
Lose It! မှာ လေ့ကျင့်ခန်း တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Database လည်းပါရှိပြီး ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရင် ကယ်လိုရီ ဘယ်လောက်လောင်ကျွမ်းမလဲဆိုတာ အလိုလို တွက်ချက်ပေးမှာပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပြီးရင် App မှာ Add Exercise ကိုနှိပ်ပြီး ပြုလုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို ထည့်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင် စားထားတဲ့ အစားအစာ ရဲ့ ကယ်လိုရီ နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လို့လောင်ကျွမ်းသွားတဲ့ ကယ်လိုရီ တွေကို App ကတွက်ချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Lose It! မှာ နောက်ထပ်ကောင်းမွန်တဲ့ Features တွေပါရှိပါတယ်။ Loseit.com မှာ အခမဲ့ အကောင့်တစ်ခုပြုလုပ်ပြီး ဝိတ်ကျဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဝါသနာတူ သူငယ်ချင်းတွေ ရှာဖွေမိတ်ဖွဲ့လို့ရပါတယ်။ သင့် ဒေတာတွေကိုလည်း အွန်လိုင်းမှာ သိမ်းထားလို့ရပြီး Report တွေလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ နေ့စဉ် ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း ကြည့်လို့ရပြီး တိုးတက်မှု ကို ဇယား ကွက် မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Lose It! က နေ့စဉ် စားသောက်တဲ့ ကယ်လိုရီ တွေကို တွက်ချက် မှတ်သားပေးနိုင်တဲ့ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် စားသောက်တဲ့ အစားအစာတွေကို မှတ်သားရတာ အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် သင်စားနေကျအစားအစာတွေကို Favorites ထဲမှာ ထည့်ထားရင်အလုပ်ရှုပ်သက်သာစေပါတယ်။ Lose It! ရဲ့ Interface က ရိုးရှင်းပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူပါတယ်။ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ တွက်ချက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် သင်စားသောက်မယ့် အစားအစာ ကို သင့်တော်ရာ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ကျချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် သင့်မှာ အမှန်တကယ်ရှိနေပြီဆိုရင် Lose It! က သင့်ကိုများစွာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
Lose It! ကို iOS 5.0 နဲ့ သူ့ နောက်ပိုင်း ဗားရှင်းတွေမှာသုံးနိုင်ပြီး iPhone, iPad, iPod Touch အားလုံးမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
iOS App, lose it!
Newer တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေနဲ့ ကာရာအိုကေ တူတူဆိုရအောင်
Older PRUDENTIAL အသက်အာမခံကုမ္ပဏီ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ဖွင့်လှစ်
တစ်ယောက်ထဲ သီချင်းဆိုရတာနဲ့ စာရင် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး သီချင်းဆိုရတာ ပိုပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံ...